Ukukhangisa KwePodcast Kuza Ngeminyaka | Martech Zone
Ngokukhula okungakholeki kwe-podcasting kule minyaka edlule, ngizizwa sengathi imboni iye yephuza ukuvumelanisa ubuchwepheshe bokukhangisa kuyo. Akunasizathu esincane noma kungenasizathu sokuthi amasu afanayo wokukhangisa enzelwe ividiyo angakwazanga ukusetshenziswa ku-podcasting - noma nje izikhangiso ezenziwa kusengaphambili, isibonelo.
Izikhangiso ezifakwe ngamandla zenyuse isilinganiso sazo semali esichithwe yizikhangiso ngo-51% kusuka ngonyaka wezi-2015 kuya kowezi-2016 ngokusho kuka- Isifundo Semali Engenayo ye-IAB Podcast. Ngibheke phambili ekuthuthukisweni kokufakwa kwesikhangiso. Ngama-algorithms, impela singakha ama-algorithm wokufaka isikhangiso esikhangisweni semvelo kufayela elilalelwayo (ungazise uma usungula leso sixazululo… ngifuna isikweletu).
Ngisanda kushicilela okungakholeki ingxoxo noTom Webster omangalisayo we-Edison Research lapho sixoxa ngokwedlule, okwamanje, nekusasa le-podcasting. Kuyo, sixoxa ngokuthi isiteshi sikhula kanjani ekuthandeni nabathengisi. Eqinisweni, ukukhangisa kwe-podcast kudlule ama- $ 200 wezigidi ngonyaka odlule, okuphindwe kabili kunalokho okwakuyiminyaka emibili edlule ngokusho kwale infographic, Ukuqhuma kwePodcast infographic, kusuka eConcordia University St. Paul Online.
Izintatheli zixhumanise i-podcast boom nobuningi bama-smartphones, isikhathi esichithwa ekuhambeni, kanye nezinsizakalo zomculo eziku-inthanethi. Abanye bathi lokhu kungumphumela wokuvuselela ubuchopho nomlutha wokufunda komsindo, noma amandla okulalela amaningi. Ubuhle buyalandelana. Mhlawumbe isithako semfihlo se-podcasting ukuthi senza imisebenzi eminingi kangcono kunanoma iyiphi enye indlela, silethe umthamo wokukhiqiza kunoma iyiphi ingxenye yenjwayelo yakho yansuku zonke.
Abantu balalela kuphi ama-podcast? Ngokusho kukaMidroll
52% wabalaleli be-podcast balalela ngenkathi Ukushayela
46% wabalaleli be-podcast balalela ngenkathi Ukuhamba
40% wabalaleli be-podcast balalela ngenkathi ukuhamba, ukugijima, noma ukuhamba ngebhayisikili
37% wabalaleli be-podcast balalela ngenkathi ukuhamba ezokuthutha zomphakathi
32% wabalaleli be-podcast balalela ngenkathi sebenza phandle
Nayi i-infographic ephelele, Ukuqhuma kwePodcast: Ukubheka ukuthi Ngubani, Yini, Futhi Kungani Wefomethi Ephoqelela Kakhulu Yomsindo
Tags: ukufakwa kwesikhangisoIConcordia University St. Paul Onlineucwaningo lwe-edisonIABinfographicukufakwa kwesikhangiso se-podcastUkusetshenziswa kwezikhangiso ze-podcastizikhangiso ze-podcastukukhangisa kwe-podcastukukhula kokukhangisa kwe-podcastabalaleli be-podcastisifundo semali ye-podcastizibalo ze-podcastukuqhuma kwe-podcastumculi websterabantu balalela nini ama-podcast